सेरोफेरो : श्रम स्विकृति लिन तीन घण्टा उभिँदा...
श्रम स्विकृति लिन तीन घण्टा उभिँदा...
जेष्ठ ३०, २०७३- केही वर्षअघिको कुरा । मेरा एक फुपूका छोरालाई साउदी अरबबाट नेपाल फर्केपछि काठमाडौं खुब घुम्न मन लागेछ । रत्नपार्क जान्छु भने । कामको व्यस्तताले म साथै जान सकिनँ । दश मिनेटको पैदल दुरीमा रहेको शान्तिनगर, नयाँ बानेश्वरबाट गाडी चल्छ चढेर जानुहोला भनेँ । साँझ मात्र थाहा भयो रत्नपार्क हिंडेका उनी भक्तपुर पुगेछन् । कारण, ‘रत्नपार्क’ लेखेको गाडी देखेर चढिहालेछन् जुन गाडी रत्नपार्कबाट फर्केर भक्तपुर जाँदै थियो । थकथक लाग्यो, उनलाई मैले बाटो पार गरेर मात्र गाडी चढ्नु भन्न पथ्र्यो । त्यसपछि उनी विदेश जाने फर्कने शिलशिलामा जति पटक काठमाडौं आउँछन् मैले विशेष ध्यान दिने गरेको छु, समस्यामा नपरुन भनेर । उनले साउदी अरबमा काम गर्न थालेको लगभग दुई दशक भैसक्यो । विगत डेढ दशकदेखि उनी रियादस्थित एक कन्स्ट्रक्सन कार्यलयमा कार्यालय सहायकको रुपमा काम गर्छन् । मुख्य काम चिया पकाउने र बाँड्ने हो । ४ सय चानचुन रियालबाट काम सुरु गरेका उनको अहिलेको तलब विभिन्न भत्ता जोडेर लगभग ११ सय रियाल छ । नेपालीमा ३० हजार चानचुन । तलब नबढाउने बरु भत्ता बढाउने गर्दा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ । यतिका वर्षसम्म पनि उनले तलब बढाउनको लागि मुख खोलेका छैनन् । ‘दिएको खाने हो, अह्राको गर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘मरिलानु के छ र ?’
दुई वर्षको दौरानमा जम्मा ४५ दिनको छुट्टी लिएर नेपाल झर्दा उनलाई बिमानस्थलबाटै एक होटलवालाले उतै बसौं भनेर आफ्नै प्राइभेट गाडीमा लिएर हिंडेछन् ।
एक साता अघिको कुरा हो यो । नेपालको सिमकार्ड नबोकेकाले उनी म पुग्नुअघि नै गायब भए । फोनमा भोलिपल्ट मात्र सम्पर्क भएका उनले भने, ‘लेखेको हुन्छ, देखेको हुँदैन । रातको ११ बजे बल्ल एरपोर्टबाट बाहिरिएँ, होटलवालाले जाउँ भन्यो, भाइ सुतेका हांैला, दु:ख किन दिउँ भनेर म पनि हिडेँ ।’ मैले उनलाई जोकोहीसँग यसै नहिड्नु भनेर सम्झाउन मात्र सकें । बिहान मेरो डेरामा आएपछि पो थाहा भयो, साँझ होटलमा लगेर राखेर विहान नयाँ बसपार्कबाट नयाँ बानेश्वरसम्म आउँदा उनको लगभग २५ सय रुपैयाँ चैट भएछ । धन्न थोरैमा जोगिए भन्नु पर्‍यो । ‘पैसा छ भने ल्याउनुस् मै साट्दिन्छु, श्रम पनि बुझाइदिउँला दाई’ भन्दैथे ठग्छ भनेर होटलवालाको यो कुरा उनले हाँसेर टारे रे । काठमाडौंबाट पोखरा लाग्नुअघि दाईको काम काठमाडौं सोल्टिमोड भित्र ताहाचलमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम बुझाउन (श्रम स्विकृति लिन) जानु थियो । म नगए उनको काम सहजै बन्छ भन्ने लागेन । हैसियतकै कुरा गर्ने हो भने दैनिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स देश भित्र्याउने श्रमका पुजारी थिए उनीहरू । देशको अर्थतन्त्रलाई टेको दिने यी कर्मीहरूप्रति सरकार र तिनका निकायहरूले गर्ने तल्लो स्तरको व्यवहारले निक्कै मन दुखाउँछ । उनको लागि श्रम बुझाउने काम, मेरो लागि विदेशमा पुगेका श्रमिकहरूको श्रमको मूल्य बुझ्ने काम । मेरा बाँकी काम थाँती राखेरै भएपनि म उनीसँग गत साता एका विहानै कालिमाटी तर्फ लागें । सोल्टिमोडबाट उत्तर लागेपछि बल्ल थाहा भयो, यो त अनौठो संसार रहेछ । यो सडकमा तपाईंलाई कुनै एजेन्टले समाउन आएनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ आज श्रम कार्यलय छुट्टी छ । ‘दाई इन्सुरेन्स यता छ, फारम यहाँ भरिन्छ, पार्किङ यता छ, माथि महँगो लिन्छ, हामी सबै मिलाउँछौं उता ठग्छन्’ ठाउँ नबुझेको, नजानेको र नचिनेको मान्छेलाई यस्तो सुनेपछि रिंगटा लाग्दैन होला त ? श्रम कार्यलय खोज्दै पुग्दा पार्किङमै तपाइलाई खुसुक्क बोलाउन आउने पनि भेटिन्छन् । सोधपुछ गर्ने सहज ठाउँ नभेटेपछि, जोकोही पनि त्यहाँ वरपर घुमिरहने एजेन्टको पन्जामा पुगिहाल्छन् । जसले पासपोर्टको फोटोकपी गर्ने, फारम भर्ने, बिमाको कागजात तयार गरिदिने, फोटो खिच्ने ठाउँमा पुर्‍याउने सबै काममा सघाउँछन् । १ सय देखि ३–४ सयसम्म पाएजति उनहरूले कामदारसँग लिन्छन् भने इन्सुरेन्स कम्पनीसँग छुट्टै कमिसन बुझ्छन् । सरकारी संयन्त्र जति बलियो हुन्छ यस्ता झिनामसिना समस्या बिलाएर जान्छन् वा व्यवस्थित हुन्छन् ।
अहिलेकै संयन्त्रका माझ बाटैमा अलमल हुने हामी जस्ताको लागि एजेन्टहरूको पन्जाबाट फुत्कन्छु भन्नु अर्को दिन पनि एउटै कामको लागि धाउनु जस्तै हुन्छ । दाई भन्छन्, ‘दुईचार पैसा नदिई यहाँ कतै काम बन्दैन ।’ साउदी एरपोर्टमै पनि लगेज १ केजी बढी भयो भनेर बिमानस्थलमा काम गर्ने नेपालीले नै एक सय रियाल (२८ सय रुपैयाँ) ठटाइदिएछन् उनलाई । बढी लगेजको पैसा लिनेले बिल भने दिएनन् रे । ‘दाई तपाईंलाई त ठगेछ नि,’ मैले यसो भन्न नपाउँदै उनले भने, ‘अर्को साथीको त दुई सय गयो, म त कममा परेकाले चुप लागें ।’
उनको कुराले नै उनको सिधापन जनाउँथ्यो । जे होस्, विभाग बाहिर रहेको प्राइभेट बिमा कम्पनीमा रकम बुझाएर फाराम भरेपछि हामी विभागको व्यक्तिगत श्रम बुझाउने भवन तर्फको गेटमा पुग्यौं । दलालहरूले पच्छ्याउँछन भनेर होला सायद गेटमा निक्कै कडिकडाउ थियो । म पस्न पाइनँ । हुन त काम धेरै बाँकी थिएन, कति नै समय लाग्थ्यो र ? भित्रै रहेको बैंकमा एक हजारको भौंचर भरेर बुझाउने । अर्को झ्यालमा पासपोर्टमा स्टिकर टाँस्नको लागि पासपोर्ट र बिमाको कागजात बुझाउने । स्टिकर टाँसिएको पासपोर्ट फिर्ता लिन अर्को झ्यालमा केही बेर बस्ने । ‘साँच्ची कति समय लाग्छ ?’ प्रश्न सुन्ने बित्तिकै गेटका गार्डले भने, ‘लाग्न सक्छ दुई, तीन पाँच घण्टै पनि लाग्न सक्छ ।’ म अचम्ममा परेँ, अब भने बुझ्न, भोग्नैको लागि भित्र जानु पथ्र्यो भन्ने भयो । यति धेरै समय कसरी लाग्छ ? म बाहिर के गरेर बस्ने ? ‘मलाई पनि भित्र जान दिनूस् न, यतिका समय दाई त हराउन बेर छैन हो,’ मेरो कुरा सुनेपछि गार्डले भने, ‘विदेशबाट फर्केको मान्छे नेपालमा कसरी हराउँछ ?’ उनको प्रश्न जायज थियो । तर उनले बुझेनन्,‘वषौंसम्म विदेशको एकै अफिसमा एकै खालको काम गर्ने र बाहिर नचाहर्ने मान्छे कस्तो एकोहोरो हुन्छ होला ?’ भैगो, मैले बुझाउन पनि खोजिनँ । बाहिर निस्केँ । आधाघण्टा टहलिएँ । मनमा हुटहुटी बढ्यो । यति धेरै समय केमा लाग्ला ? कति गेटमा हेरेर बस्नु । यता उता हुन्छु भनेर भन्नलाई उनीसँग नेपालको सिम पनि थिएन । यति धेरै कुरा बुझाएर फेरि गेटभित्र पस्न मलाई निक्कै कसरत गर्नु पर्‍यो । त्यहीँ भित्र पनि दाई भेटिएनन् । काम भ्याएर फर्किएर बाटोमा हराए होला भन्ने कुराले केही बेर तनाब दियो । पछि उनी निक्कै कुनाको काउन्टरमा बसेको चाल पाएँ । आफू कहाँ जाँदैछु , किन यहाँ आउँदैछु भन्ने अर्थ पनि राम्ररी नबुझ्ने धेरै थिएँ त्यहाँ लाइनमा थिएँ । सबै भन्दा ठूलो खचाखच भने स्टिकर टाँसिएको पासपोर्ट बुझ्ने ठाउँमै थियो । जहाँ थिए लगभग ७०/८० जना मानिसहरू । बस्नको लागि दुई बेन्ची थियो ८ जना मुस्किलले अट्ने । बाँकी सबै उभिएर टहलिनु पर्ने । यस्तो लाग्थ्यो कि मालिकहरू घाँस छिमल्दै छन् र हामी भोका भेडाहरू कतिखेर घाँस झर्ला र खाउँला भनेर एकतमासले टोलाइराखेका छौं । प्रचण्डगर्मीका माझ त्यसरी उभिनु पर्दा कसको कन्सिरी नतात्ला ? गर्न त त्यहाँ छानो थपेर शितल बढाउन सकिन्थ्यो । कुर्ची थपेर बस्ने सुविधा थप्न सकिन्थ्यो । यसको लागि पैसा हैन समवेदना चाहिन्छ, भलाईका लागि केही गर्छु भन्ने मनोबल चाहिन्छ जुन त्यो कार्यलयमा देखिएन । पैसाकै कुरा गर्ने हो भने त नेपाल राष्ट्रबैंकले निकालेको पछिल्लो आंकडा अनुसार दैनिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स देश भित्र्याउने श्रमका पूजारी थिए उनीहरू । श्रम विभाग त एक उदाहरण मात्र हो, अर्थतन्त्रलाई टेको दिने यी कर्मीहरू प्रति सरकार र तिनका निकायहरूले गर्ने तल्लो स्तरको व्यवहारले निक्कै मन दुखाउँछ ।
हुन त बेलाबेलामा माइक बोकेर नाम बोलाउने र पासपोर्ट जाँचेर मात्र जानुहोला भन्ने बुझाउने त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीको बोल्ने तरिका भने निक्कै राम्रो थियो । दु:ख लाग्दो कुरा त न आरामले बस्न मिल्थ्यो न आरामले उभिन नै । कोही आजै विदेशबाट फर्केका थिए । कसैलाई घर जाने गाडी चाँडै समात्ने हतार थियो । कसैलाई आजै विदेश उड्नु थियो । प्रायले कम्तिमा तीन घण्टा कुरेका थिए, त्यो पनि उभिएरै । बेलाबेलामा आक्रोश पनि पोख्थे । लगभग १२ बजे बैंक भौचर, बिमाको कागजात सहितपासपोर्ट बुझाएको हामीले सवा तीन घण्टा पछि मात्र स्टिकरसहितको पासपोर्ट फिर्ता पायौं । त्यसमाथि मेसिन बिग्रेकोले स्टिकरमा प्रिन्ट राम्रो आएनछ ।‘नयाँ मेसिन मगाएको थुप्रो समय भयो, आएकै छैन के गर्ने ?,’ भन्ने गुनासो उनै कर्मचारीको सुनिन्थ्यो । अध्यागमन कार्यलय र श्रम विभागको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा सामान्य त्रुटीका कारण बिमानस्थलमा धेरैले दु:ख पाएका घटना धेरै सुनिएका छन् । यस्तै घानमा परिन्छ कि भन्ने चिन्तात छदै थियो । त्यो भन्दा बढी धेरैलाई खड्केको प्रश्न थियो‘कम्प्युटरबाट स्टिकर प्रिन्टगरी पासपोर्टमा टाँस्न तीन घण्टा कसरी लाग्छ ?’
प्रकाशित: जेष्ठ ३०, २०७३